မိုးကောင်းသူတို့ အမေ့အိမ်ကို ပြန်တုံး စားချင်တာလေးတွေ မှတ်သွားပြီး လုပ်ခိုင်းပြီး စားခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ မနက်စာကို ဘာစားမယ်၊ ညာစားမယ်ဆိုပြီး ရှိသမျှ ပါဝါအပြည့်သုံးပြီး စားခဲ့တယ်။ ပါဝါမသုံးလဲ စားစေချင်လွန်းလို့ လုပ်ပေးတယ်။ ငါ့သမီးလေး အစားအသောက် ဆင်းရဲရှာမှာပဲဆိုပြီး မိုးလင်းကတည်းက မျက်စိနှစ်လုံးဖွင့်ပြီ ဆိုတာနဲ့ မနားတမ်း တစ်ခုပြီး တစ်ခု ကျွေးတော့တာပဲ။ အစားနဲ့ပါးစပ်နဲ့လက်နဲ့ကို မပြတ်စေရဘူး။ ကိုယ့်က အောက်မေးရိုးလေး အသာလေး လုပ်ပြီးစားရုံပဲ။ ဟဲဟဲ...........။ မိုးကောင်းသူတို့ ဇိမ်ကြနေတာ။ အမေရေ ခေါပုတ်ကြော်စားချင်တယ်ပြောတော့လဲ ခေါပုတ်ကြော်ပေးတယ်။ ကိုယ်က ဘေးကနေ တောက်တို လုပ်ပေးရုံပဲ။ မိုးကောင်းသူတို့က ခေါပုတ်ကြော် (သို့) ခေါပုတ်ကင်ကို ခရမ်းချဉ်သီး ပန်ထရွေဖျော်နဲ့တို့ စားရတာ အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ဒုတိယ ဆီတိုပူးနဲ့တို့စား ရတာပေါ့။ ကိုယ်တော်ကြီးက ပဲပြုတ်လေးနဲ့မှ ဆိုလို ပဲပြုတ်လေးလဲ ပါသေးတယ်။ ကဲ ......... ဒီနေ့တော့ ခေါပုတ်ကြော်ကို အားမနာတမ်း သုံးဆောင်သွားပါအုံးလား။
ခေါပုတ်ကြော်၊ ခရမ်းချဉ်သီး ပန်ထရွေဖျော်၊ ဆီတိုပူး၊ ပဲပြုတ် ဆီဆမ်း၊ ရေနွေးကြမ်း
ဒါက မိုးကုတ် ခေါပုတ်ပါ။ မိုးကုတ်က အစ်မတော်ကြီးရဲ့သူငယ်ချင်းက လက်ဆောင်ပေးလို့။ စားလို့အရမ်းကောင်းတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီး ပန်ထရွေဖျော် စပ်စပ်လေး
ခရမ်းချဉ်သီးက ဗမာခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ဖျော်တာပါ။ (ခရမ်းချဉ်သီးကို မီးမဖုတ်ဘဲ ပြုတ်လိုက်တယ်။ ငရုတ်သီး နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူပဲ တစ်ခါတည်း ထည့်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။)
ကောက်ညှင်းဆန် ၃ ဗူး (အဖြူ၊ အမည်း မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ လုပ်စားနိုင်ပါတယ်။)
ပထမဆုံး ကောက်ညှင်းဆန်ကို ရေစင်စင်ဆေးပါ။ ပြီး ထမင်းအိုး ပေါင်းချောင်(သို့)အန် နဲ့ပေါင်းပေးပါ။ ကောက်ညှင်းကျက်ပြီဆိုရင် ငရုပ်ဆုံထဲသို့ထည့်ထောင်းပါမယ်။ (ငရုတ်ဆုံ မရှိသူများလဲ ကြွတ်ကြွတ်အိတ်သန့်သန့်(သို့) ပလက်စတစ်အိတ်သန့်သန့်ထဲ ကောက်ညှင်းဆန် ထည့်ပြီး ထောင်းနိုင်၊ ထုနိုင်ပါတယ်နော်။) ငရုတ်ဆုံမကပ်စေရန် အရင်ဆုံး ဆီနည်းနည်း သုတ်ပေး(သို့)ပွတ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီး ဆားနည်းနည်ထည့်၊ ထောင်းထားတဲ့ နှမ်းလှော်နည်းနည်းထည့်၊ ကောက်ညှင်းဆန်ထည့်ပြီး ထောင်းပေးပါ။ ဆန်လုံးပျောက်သွားသည်အထိထောင်းပေးပါနော်။ ပြီး ခေါပုတ်ကို ပြားပါတော့မယ်။ လက်ကို အရင်ဆုံး ဆီနည်းနည်းနဲ့ ပွတ်လိုက်ပါ။ ပြီးမိမိလိုချင်သော ခေါပုတ် အပြား အကြီး အသေး ကို ပြားနိုင်ပါပြီ။ ပြီး ဆီသုတ်ထားတဲ့ လင်ပန်းထဲသို့ထည့်ပြီး ခဏအေးသွားအောင်အထိထားလိုက်ရင်ပဲ ခေါပုတ်ရပါပြီ။ တစ်ချို့လဲ ထောင်းထောင်းပြီးချင်း ခေါပုတ်ကိုလုံး၊ ပြီး နှမ်းလှော်ထောင်းနဲ့ စားပါတယ်။ ပူပူလေးနဲ့ကောင်းမှကောင်းပါ။
Posted by မိုးကောင်းသူ at 12:03 AM
အားပါးပါး.. ငတ်နေတာကြာလှပေါ့ဗျာ... ဂလု..
ပြထားတာ အားလုံးစားချင်စရာ အကြိုက်တွေချည်းဘဲ
အတော်ပဲ ခေါပုတ်လုပ်နည်းသေချာသိချင်နေတာ။ တစ်ခါမှ မစားဖူးသေးဘူး။ စမ်းစားကြည့်ရမယ်။ ကျေးဇူးနော်
ခေါပုတ် ခေါပုတ် စားချင်တယ်မမ
စားချင်တယ်။ စားချင်တယ်။ Thanks for sharing. It is so nice to read your blog.
ကောက်ညှင်းက ထမင်းပေါင်းအိုးအပေါ်အံလေးပေါ်တင်ပြီးပဲပေါင်းရမှာလား။ အဲလိုဆိုဘယ်နှမိနစ်လောက်ပေါင်းရပါသလဲ။ ထမင်းချက်သလိုချက်ရမှာလား။ ဖြေပေးပါနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောက်ညှင်းက ထမင်းပေါင်းအိုးအပေါ်အံနဲ့ပေါင်းလဲ ရပါတယ်။ ၄၅ မိနစ်လောက်ဆို ကောက်ညှင်းကျက်ပါပြီ။ ထမင်းချက်သလိုလဲ ချက်လို့ ရပါတယ်နော်။ ရေကလဲ ထမင်းချက်သလိုပဲထည့်ပြီး ချက်လို့ရပါတယ်။အဲဒါက ပိုလွယ်မယ်ထင်တယ်။
နောက်ကျမှ ပြန်လို့ စိတ်မရှိနဲ့နော်။ တစ်ခါ တစ်ခါလဲ မေးသွားတာ မသိလိုက်လို့ပါ။